kophotoke Junior Member
08-18-2016, 11:31 AM (08-14-2016, 05:41 PM)byaegyi Wrote: တာမွေဈေးနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် one section တသောင်းခွဲ စော်တော်တော်များများရှိတယ်ဆိုင်နာမည်ရှိလား bro 1 hr section ပေါ့
08-18-2016, 03:25 PM (08-16-2016, 03:42 PM)လူဆိုးလေး Wrote: မြေက်ဒဂုံ တို့ တောင်ဥက္ကလာ တို့ ဖက်မှာမရှိဘူးလားဗျို့ သ်ိရင်ပြောကြပါအုန်း
ဟိုတုန်းကပြည်လမ်း၆ခွဲနားမှာ ရပ်နေတဲ့ ဇ တွေရှိတယ်ခုရှိတယ် ခုရှိသေးလားဗျို့
johnwint Junior Member
08-18-2016, 09:46 PM (08-14-2016, 05:41 PM)byaegyi Wrote: တာမွေဈေးနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် one section တသောင်းခွဲ စော်တော်တော်များများရှိတယ်
pet Junior Member
08-19-2016, 12:29 AM ဘော်ဒါတို့ နေ့ခင်းပိုင်းခဏလောက်ဖိလို့ရမယ့်နေရာလေးများဈေးနှုန်းလေးနဲ့ကူညီပေးပါလားတချက်လောက်
08-19-2016, 12:31 AM ဘော်ဒါတို့ နေ့ခင်းပိုင်းခဏလောက်ဖိလို့ရမယ့်နေရာလေးများဈေးနှုန်းလေးနဲ့ကူညီပေးပါလားတချက်လောက်
08-20-2016, 01:15 AM (08-14-2016, 05:41 PM)byaegyi Wrote: တာမွေဈေးနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် one section တသောင်းခွဲ စော်တော်တော်များများရှိတယ်
တာမွေဈေးတော့ သိတယ် ဘရို။ ဒါပေမယ့် အဲ့ အောက်မှာ ဘာဆိုင်ရှိသလဲ? ဘယ်နှစ်လွာလဲ? ထင်သာ မြင်သာ ဘာတွေရှိသလဲ? ဆိုတာတွေကို အလင်းပြပါလား ဘရို။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တွေ့ရင်လည်း ကျေးဇူးဆပ်ပါ့မယ် ဘရို။ Find
ko ko wa Junior Member
08-21-2016, 02:51 AM (08-17-2016, 11:07 PM)jipmin Wrote: (08-14-2016, 05:41 PM)byaegyi Wrote: တာမွေဈေးနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် one section တသောင်းခွဲ စော်တော်တော်များများရှိတယ်
Pls tell me where are they standing.....
08-30-2016, 01:29 AM (08-18-2016, 03:56 AM)Falar Wrote: (08-14-2016, 05:41 PM)byaegyi Wrote: တာမွေဈေးနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် one section တသောင်းခွဲ စော်တော်တော်များများရှိတယ်
တာမွေဈေးနေခြည်လင်းလျှပ်စစ်ပစ္စည်ဆိုင်အပေါ်ထပ်တည့်တည့် ပထမထပ်မှာ ဆော်တွေကထန်တရ် အငယ်နဲ့အလတ်လေးတွေ
Thanks given by: KKTO
redrooster Junior Member
10-01-2016, 12:47 PM မ၀ိုင်း ဆိုတဲ့ ဘွားတော်ရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်လေးများ သိရင်မစကြပါအုံး
Ko Ko Luso Junior Member
10-07-2016, 09:33 AM (08-18-2016, 03:25 PM)myatmoe Wrote: (08-16-2016, 03:42 PM)လူဆိုးလေး Wrote: မြေက်ဒဂုံ တို့ တောင်ဥက္ကလာ တို့ ဖက်မှာမရှိဘူးလားဗျို့ သ်ိရင်ပြောကြပါအုန်း
မနေ့ကတော့ မင်္ဂလာဒုံဖက်ကလာရင် လေဆိပ်လမ်းခွဲအကြော် ကွေ့မှာ တွေ့တာနဲ့ ခေါ်စားလိုက်တယ်။ စော်ကငယ်ငယ်လေး။ ၁ ဆက်ရှင်ကို ၁၅၀၀၀ တောင်းတယ်။ တန်တယ်လို့ပဲပြောပရစေ။ ကြိုက်တဲ့ ပုံစံ လုပ်ခိုင်းလို့ရတယ်။ မှုတ်မပေးတာတခုတော့ဆိုးတယ်ဗျာ။ အဆင်ပြေပါစေ။